2014 လည်ပြန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » 2014 လည်ပြန်
Posted by padonmar on Jan 2, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 24 comments
365 ရက် မနားတမ်း ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဒီ တနှစ်ကို လည်ပြန်ကြည့်မိပါတယ်။( ခြင်္သေ့လည်ပြန်တော့ ဟုတ်မယ်မထင်၊သမင်လည်ပြန်လောက်ပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့)
ဒီနှစ်ကတော့ လမ်းများများလျှောက်ပြီး ခလုပ်များများ တိုက်တဲ့ နှစ်၊
ခေါင်းပေါ်မှာ ရေအိုး ၅လုံးလောက် တပြိုင်တည်း ရွက်မိတဲ့နှစ်လို့ ပြောရမလိုပါပဲ။
လမ်းလျှောက်လို့ ခရီးရောက်တာ လူမြင်ပေမယ့် ခလုပ်တိုက်မိလို့ ကွဲတဲ့ ခြေမကိုတော့ အနားကလူတွေပဲ သိမှာပါ။
ထားဝယ်သူတွေ ရေအိုး ၁၀လုံးလောက်ကို လှလှပပ ရွက်ပြီး စက်ဘီးတောင် စီးပြတာကို အားကျပြီး မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သူက ရေအိုး ၅လုံးရွက်ပြချင်တာ ၃လုံးလောက် အထပ်မှာတင် ဟပ်ထိုးဟပ်ထိုးဖြစ်လို့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သစ်ပင်တပင်လို့ နှိုင်းရရင် ဒီနှစ်တော့ တောင်ကိုင်း၊မြောက်ကိုင်း၊ရှေ့ကိုင်း၊နောက်ကိုင်း အကုန် ရောယှက်အကန့်တွေ ရောသွားတဲ့ နှစ်လို့လည်း ပြောရပါမယ်။ ပွတ်လို့ တိုက်လို့ မီးပွင့်တာကြောင့် ရေလောင်းရတဲ့ အခါလည်းရှိတာပေါ့။
စိတ်ချမ်းသာအောင် ဒီနှစ်ထဲ လုပ်ဖြစ်တဲ့ ကောင်းမှုလေးတွေ အရင် စဉ်းစားလိုက်ပါမယ်။ပြီးမှ ကိုယ်ညံ့တာတွေ တွေးပါမယ်။
(၁)ဒီနှစ်ထဲမှာ အနှစ်သက်ဆုံး အဖြစ်ကတော့ မိသားစုထဲမှာ အားကိုးရဆုံး အကိုကြီးကို ရက်ရှည်တရားအားထုတ်ဖို့ ပါရမီဖြည့်ပေးနိုင်တာပါပဲ။သူဘယ်လောက်ထိရမယ်ဆိုတာတော့ သူ့ပေါ်ပဲတည်ပါတယ်။ လေးအိမ်စုဆရာတော် အရှင်ဝိစိတ္တရဲ့ ဆိုရိုးကတော့ ` ကံကောင်းသူတွေက တရားအားထုတ်ခွင့်ရတယ်။ ကံမကောင်းသူတွေက တရားအားထုတ်ခွင့်နဲ့ လွဲချော်တယ်။ကံဆိုးသူတွေက တရားအားထုတ်ဖို့ အခွင့်အရေးကို ရှောင်ကြတယ်။´
အကို့ကို ကံကောင်းအောင် ကလျာဏမိတ္တအဖြစ် ကူညီပေးနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ်ကံမကောင်းသေးပေမယ့် ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။
(၂)နောက်ပြီး ဆရာလုပ်လွန်းတဲ့ ကိုယ့်အပေါ် အမြင်စိမ်းနေတဲ့ ချစ်တူမလေးကလည်း ရက်(၇၀)တရားအားထုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့ တရားဆွေးနွေးဖက် ဓမ္မမိတ်ဆွေဖြစ်သွားလို့ သူ့ရဲ့ ချစ်ခင်မှုပြန်ရလာတာလည်း စိတ်ချမ်းမြေ့စရာ တခုပါပဲ။
(၃)၀ိနည်းတော်ကို လေးစားလိုက်နာတဲ့ ပဏ္ဍိတာရာမဆရာတော်ကြီးလို သံဃာမျိုးကို ဖူးမြင်ခွင့် ရတဲ့အတွက် သံဃံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ ကို နားလည်ခဲ့ပါတယ်။
(ဆရာတော်ကြီးကတော့ ကိုယ့်ကို ဂျီးထူတဲ့ ဆပ်ပြာသည်တဲ့)
(၄)ကိုယ့်ဇာတိမြို့လေးကနေ ဝေးကွာနေတဲ့ ဆရာ/ဆရာမတွေ ၊ကျောင်းသားဟောင်းတွေ ပြန်လည်ဆုံစည်းတဲ့ပွဲလေး ဖြစ်မြောက်အောင် အများနဲ့ဝိုင်းပြီး တတပ်တအား ပံ့ပိုးပေးခွင့်ရခဲ့တာကြောင့် သူတို့တွေ ပျော်နေကြတဲ့ ပုံတွေ ကြည့်မိတိုင်း ကိုယ်လည်း ကြည်နူးဝမ်းသာရပါတယ်။
(၅)ဒီလိုပဲ အချိန်မီပြီးဖို့၊အရည်အသွေး မညံ့ဖို့ ဇာတိတူမောင်နှမတွေ လက်တွဲပြီး ပြိုင်တူတွန်းခဲ့ကြတဲ့ အရွေ့လေးက ရွှေခယ်ရတနာမဂ္ဂဇင်း ဆိုပြီး မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို မြင်မြင် ကိုယ့်မြို့ ကိုယ့်ကျောင်းသားတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာပဲ ရွှေခယ်ရတနာ တံဆိပ် ခပ်နှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်တောင် ကျေနပ်ပါပြီ။
(၆)ဒီနှစ်ထဲမှာ မမဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်းရဲ့ ကျန်းမာရေး ဟောပြောပွဲတွေကို ကောက်နှုတ်ချက်ရေးပြီး ကူညီပေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဟောပြောပွဲအခွေ ကြည့်သူတွေအတွက် အထောက်အကူလေး နည်းနည်းပါးပါးတော့ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ငန်ပြီးသား မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးထဲကို ဆားလေးနည်းနည်း ထပ်ထည့်ပေးသလိုပေါ့။
(၆)ဒီနှစ်တွင်းမှာပဲ စာမေးပွဲ ၃ခုကို လောဘတကြီး မနိုင်မနင်းဖြေပစ်လိုက်မိတယ်။စာမေးပွဲအောင်လို့လည်း ဘာမှတော့ ထူးမသွားပါဘူး။ဒါပေမယ့် စာဆိုရင် သိပြီးတာထက် ပိုပိုသိချင်တဲ့ လောဘကြောင့် ဟိုစာလည်းဖတ်ချင် ဒီစာလည်းဖတ်ချင်။သူများတွေ တနှစ်တည်း စာမေးပွဲတွေ အများကြီးဖြေနိုင်တာကို အားကျပြီး ကိုယ်လည်း ဒီလောက်တော့ နိုင်မယ်ထင်မိ၊တကယ်ဖြေတော့မှ အလုပ်ကလည်း ပစ်ထားတယ် အပြောမခံချင်တာကြောင့် အလုပ်တဖက် စာမေးပွဲတဖက်နဲ့ ကုသလောဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရက်တွေလည်းရှိပါ့။ဒါကြောင့် ရလာဘ်က ချက်ခြင်းအကျိုးပေးပြီး ၂ခါမှားနဲ့ ဂုဏ်ထူးပြုတ်ဖြစ်တာပေါ့။
အစပိုင်းမှာ ကုက္ကုစ္စဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ အပြစ်တွေတင်နေမိရာက ယောဆရာတော်ကြီးက တိပိဋကစာမေးပွဲမှာ စာ ၃ခါထောက်ခံရလို့ ကျပြီဆိုတာတောင် စာတွေဆက်ပူဇော်နေတဲ့အကြောင်း ဖတ်ရမှ ရှက်နောင်တရမိပါတယ်။
(၇)နှစ်ကုန်ခါနီးမှာတော့ ဈေးသည်ကြီးဆန်နီ လုပ်ပြီး ကိုယ့်မြို့က ထွက်ကုန်တွေ Online ပေါ် တကြော်ကြော်အော်ရောင်းခဲ့ပါတယ်။အို..ဘယ်သူဘာပြောပြော ကိုယ့်ပရိသတ်ကြီးနဲ့ ကိုယ်တော့ အပေးအယူတွေ တဲ့လို့ ပျော်နေမိတာပါပဲ။
(၈)အကိုကြီးတွေ အမကြီးတွေကပြောကြတယ်။ ကျမတို့ အမျိုးရွယ်တူ တသိုက် က ပိုက်ဆံရှာတဲ့ အလုပ်ဆို မဖြစ်ထွန်းကြဘူး။ ပိုက်ပိုက်မရတဲ့ လူမှုရေးအလုပ်ဆို ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့တဲ့။
ဟုတ်လည်းဟုတ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးမှာတော့ ကိုယ်ဟာ အညံ့ဆုံးပါပဲ။လူလူချင်း တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင် ဈေးစကားပြောရ၊အပေးအယူလုပ်ရပြီဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တာ ဖြစ်အောင် ဘယ်တော့မှ မပြောနိုင်ပဲ လျှော့ခဲ့ရလို့ ပြီးတော့မှ ငါညံ့လိုက်တာလို့ ခဏခဏဖြစ်ရပါတယ်။ဒီတသက်တော့ အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးသမားကြီး ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။အသက်ပဲ ဗထက်ချိုက်နေပြီလေ။
(၉)ကိုယ်ညံ့တာကတော့ ဒီနှစ်ထဲ Car accident ၂ခါဖြစ်တာမှာ သိသာတာပါပဲ။ ကိုယ်ကတော့ ဘယ်တိုက်ပါ့မလဲ။ဒီလောက် တုန်ချိချိမောင်းနေတာ။ ကိုယ့်ကို သူများက လာတိုက်သွားတာတောင်မှ Reflex က ငါမှားသွားတာ ထင်တယ်ပဲ တွေးမိတယ်။ သူများဖက်ကို အရင်ကြည့် ဘာများဖြစ်သွားသေးလဲမေး၊ကိုယ့်ဖက်က ဒဏ်ရာကို ခပ်လျှမ်းလျှမ်းကြည့်၊အလျော်အစားတွေ ပြောရမှာ၊လူတွေ ၀ိုင်းကြည့်မှာစိုးလို့ ရှက်ပြီး ကားပေါ်မြန်မြန်ပြန်တက် အဲဒီနေရာကနေ မြန်မြန်ထွက်။
တခါဖြစ်လည်း ဒီတိုင်း၊နောက်တခါဖြစ်လည်း ဒီတိုင်းဆိုတော့ ကားမောင်းရတာတောင် သွေးလန့်လာပါတယ်။မောင်းပေးမယ့်သူကလည်း မရှိတော့ ဘုရား နားညည်းတာပေါ့။
(၁၀) ဒီနှစ်ကို Year of Apology လို့လည်း ပြောချင်ပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲ ဘယ်အကြောင်းအရာပဲ လုပ်လိုက်လုပ်လိုက် အမှားအယွင်းမကင်းနိုင်လွန်းလို့ တောင်းပန်စကားချည်းပဲ ပြောနေရလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ် ရေးမိသမျှကလည်း နှစ်စကတည်းက ဂေါက်စီးရီးဆွဲလိုက်မိတာဆိုတော့ 2014 ဒီနှစ်ကတော့ ဂေါက်နှစ်ပါပဲ။ဂေါက်မိသမျှ ပတ်သက်သူမိတ်ဆွေအပေါင်းကို တောင်းပန်ရင်း 2014 ကန့်လန့်ကာချ လိုက်ပါတယ်။
2014တနှစ်တွင်း ဂေါက်မိသမျှ ဂေါက်စာရင်းလေးပြုစုလိုက်ပါတယ်။
(1) 2014 New Year Present -`အသက်ရှည်ကျန်းမာချင်လျှင်၊စားသောက်နေမှုဘ၀ကိုပြင်´
Posted by padonmar on Jan 1, 2014 in Editor’s Choice, Health & Fitness, My Dear Diary
(2) 2013 Review ၂၀၁၃ အတိတ်ခြေရာကောက်
Posted by padonmar on Jan 2, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary
(3) ဂေါက်တယ်လို့မှတ်မှာလား(၂)-လမ်းပေါ်ကအမှိုက် ကိုယ်နဲ့ဆိုင်မဆိုင်?
Posted by padonmar on Jan 10, 2014 in Creative Writing, Critic, My Dear Diary
Posted by padonmar on Jan 11, 2014 in Creative Writing, Critic, My Dear Diary
(5) ဂေါက်တယ်လို့မှတ်မှာလား(၄)-ဂေါက်တဲ့ဖက်မှာ အော်ပီကျယ်ရှိတယ်
Posted by padonmar on Jan 12, 2014 in Creative Writing, Environment
(6) ဗုဒ္ဓသာသနာ မြန်မာ့မြေမှ မထွက်ခွာဖို့
Posted by padonmar on Jan 29, 2014 in News
(7) တော်ဝင်စင်တာရှေ့ စာအုပ်ရောင်းပွဲ
Posted by padonmar on Feb 1, 2014 in Creative Writing, News
(8) ရွာသူားများအတွက် လက်ဆောင်-သက်ရှည်ကျန်းမာချင်လျှင်၊မြန်မာ့လူနေမှုဘ၀ကိုပြင်
Posted by padonmar on Feb 18, 2014 in Editor’s Choice, Health & Fitness, My Dear Diary
Posted by padonmar on Feb 18, 2014 in Aha! Jokes, Satire |
(10) အလောင်းအစားThe Bet-မြမဉ္ဇူ
Posted by padonmar on Mar 10, 2014 in Creative Writing, Literature/Books, Short Story, Think Different |
(11) အလောင်းအစား The Bet-မြမဉ္ဇူ ဘယ်လိုရေးခဲ့တယ်
Posted by padonmar on Mar 18, 2014 in Arts & Humanities, Literature/Books
(12) မွေးရပ်မြေမှ ပန်းကလေးများဆီသို့
Posted by padonmar on Mar 23, 2014 in Creative Writing, Education, My Dear Diary
(13) ပန်းကလေးများပွင့်တော့မည် 2014
Posted by padonmar on Mar 31, 2014 in Creative Writing, Short Story
Posted by padonmar on Apr 14, 2014 in Creative Writing, Critic, Think Different | 47 comments
(15) အဖူးအငုံလေးတွေက ၀င့်ဝင့်ကြွားကြွား
Posted by padonmar on Apr 15, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 15 comments
(16) ၁၃၇၆ နှစ်သစ်တွက် လက်ဆောင်-ဆင်ခြင်တတ်က အကျိုးရ
(17) တခါတုန်းက သင်္ကြန်မှာ
Posted by padonmar on Apr 18, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 22 comments
(18) ရွှေဖိနပ်ကြီး ရှပ်တိုက်စီးနေသူများ
Posted by padonmar on Apr 26, 2014 in Creative Writing, Critic | 32 comments
(19) ကြွေးကြော်နေရုံမျှနဲ့ မလုံလောက်နိုင်ပေ
Posted by padonmar on May 11, 2014 in Creative Writing, Critic | 29 comments
(20) မဟာလူသားဗုဒ္ဓ(သာသနာနှစ် ၂၅၅၈ပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင်)
Posted by padonmar on May 13, 2014 in History | 22 comments
(21) `ညှော်မယ်ဗျို့ ´
(22) ဆီးချိုရောဂါအန္တရာယ် ဉာဏ်ယှဉ်၍ ကာကွယ်မယ် (ဒေါက်တာဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း)
Posted by padonmar on Jun 1, 2014 in Health & Fitness | 27 comments
(23) ခလုပ်တိုက်ရင် ရှေ့တလှမ်းပိုရောက်ပါစေ ကလေးတို့ရေ
Posted by padonmar on Jun 9, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 20 comments
(24) နည်းနည်းလေးမက လွဲနေတယ်
Posted by padonmar on Jun 11, 2014 in Critic | 22 comments
(25) ပျက်အစဉ် ပြင်လျှင်ရ (Yangon Drainage)
Posted by padonmar on Jun 13, 2014 in Creative Writing | 27 comments
(26) အသက်တချောင်းထွက်ဖို့ဆိုတာ လွယ်ပါသလား
Posted by padonmar on Sep 14, 2014 in Creative Writing | 26 comments
Posted by padonmar on Sep 27, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 21 comments
Posted by padonmar on Oct 6, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 14 comments
(29) ဒီပါဝလီ၊မလိုင်လုံးနဲ့ ချက်ခြင်းပေးတဲ့ အကျိုး
Posted by padonmar on Oct 20, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 28 comments
(30) ဘာသာမတူ လူမျိုးကွဲလည်းချစ်တာ…(၂)
Posted by padonmar on Oct 25, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 17 comments
Posted by padonmar on Oct 25, 2014 in Creative Writing, Critic, My Dear Diary | 21 comments
(32) ဆရာကြီး ဦးအောင်သင်းသို့ မမီလိုက်တဲ့ လွမ်းစာ
Posted by padonmar on Oct 27, 2014 in Creative Writing, Literature/Books, My Dear Diary | 8 comments
(33) ကျမနဲ့ကာမတဏှာ၊၀ါးခယ်မ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ
Posted by padonmar on Oct 31, 2014 in Creative Writing, Literature/Books, My Dear Diary | 21 comments
(34) My Line of Thought,My Point of View စာမြည်း
Posted by padonmar on Nov 5, 2014 in Creative Writing, Literature/Books, My Dear Diary | 15 comments
(35) အားကျမိတဲ့ အမေရိကန်တယောက်
(36) ပညတ်တွေ အတင်မှားကြရင်ဖြင့်
(37) ဆားလေး တပွင့်နှစ်ပွင့်
Posted by padonmar on Dec 6, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 34 comments
(38) မနက်ခင်းလမ်းလျှောက်ရင်း မင်းလောင်းမျှော်
Posted by padonmar on Dec 6, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 16 comments
(39) ၀ါးခယ်မ အလွမ်းပြေ Little Wakema
Posted by padonmar on Dec 18, 2014 in Classifieds, Personal Ad., Creative Writing | 21 comments
Posted by padonmar on Dec 21, 2014 in Creative Writing | 11 comments
(41) ‘နေရောင်ခံယူ ၊ အူကိုစောင့်ရှောက် ၊ အသက်ဉာဏ်စောင့်′
(42) Dr.ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း၏ Facebook ပေါ်မှ ရှင်းလင်းဟောပြောချက်များ
Posted by padonmar on Dec 22, 2014 in Health & Fitness |2comments
(43) Dr.ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း၏ကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲ အမေးအဖြေများမှ သတိပြုဖွယ်
အာတီဒုံရဲ့ ဒီလိုပြန်ကြည့်တတ်တဲ့ တစ်နှစ်တာ ရီဗျူးလေးကို။
အကောင်းတွေ အများကြီး ကြုံခဲ့/လုပ်ခဲ့နိုင်တာ အားကျတယ်။
အ​နော့်​အတွက်​ ၂၀၁၄ က အ​ပြောင်းအလဲများတဲ့နှစ်​ ​သောကများခဲ့တဲ့နှစ်​ ဘ၀တဆစ်​ချိုးတဲ့နှစ်​
ဗဟုသုတရမယ့် စာတွေ အများကြီးရေးခဲ့တာပဲ အာတီဒုံ….။ အာတီဒုံ့လို ရေးတတ်ချင်တယ်…။
ကောင်းလိုက်တဲ့ သုံးသပ်ချက်ဗျာ… အဲလို ပြန်ကောက်နုတ်ပြီး ရေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တာ လိုက်လို့…
အနော်ကတော့ 2014 မှာ အိုသွားတယ်…
.တစ်နှစ်အတွင်းရေးသွားတာ ကိုယ်တလျှောက်လုံးရေးလာသလောက်ရှိတယ် :n:
.(2) 2013 Review ၂၀၁၃ အတိတ်ခြေရာကောက်– padonmar
.ဆိုတော့ Jan2ရက်နေ့တိုင်းမှန်မှန် အတိတ်ခြေရာကောက်နိုင်တာလည်းချီးကျူးပါတယ်
ဘယ်လောက်ခလုပ်တိုက်တိုက် အလျှောက် မပြတ် အားမာန်အပြည့် ဖြစ်နေတာကိုရော ချီးကျူးမိပါတယ်။
လင့်ခ်လေးတွေကို တိုက်ရိုက် ကလစ်ပြီးဝင်လို့ရအောင် လုပ်ထားရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်လို့….
အဲလို လင့်ခ်တွေဘယ်လိုတင်ရတယ်ဆိုတဲ့ ပို့စ် အံဇာ ရေးတာထင်တယ်။လိုက်လုပ်ကြည့်တာ ကိုယ် အ လွန်းလို့ မရဘူး။
အခု ဘယ်သူ လုပ်ပေးလိုက်တယ်မသိ၊
သာဓုပါဗျို့…။ မြင့်မြတ်တဲ့အလှူရှင်ဘ၀.. လျှောက်ခဲ့ရာ.. ခြေရာတွေပေါ့…။
Charity လုပ်တာသိပ်နည်းပြီး..လုပ်တဲ့သူတွေကိုလည်း.. အကောင်းမြင်နည်းတယ်လို့..ဆိုပါတယ်..။
ဘာသာရေးက.. ကိုယ့်အတ္တအတွက်ဖြစ်ပြီး.. Charityက..ကိုယ်အတွက်မဟုတ်.. တပါးသူအတွက်ပေါ့…။
မြန်မာ့ထေရာဝါဒမှာ.. ကိုယ့်အတွက်သာ(သာ)လုပ်ကြတဲ့အတ္တသမားများအတွက်က.. နတ်ပြည်လမ်းပွင့်နေတယ်..။ နိဗ္ဗာန်လမ်းပွင့်နေတယ်ဆိုထားတာများပြီး…
Charity လုပ်.. fundraise လုပ်သူတွေခမြာ..လူအများပျော်အောင်.. ပျော်ပွဲရွင်ပွဲနဲ့များ လုပ်ကြတယ်ဆို…ငရဲရောက်မယ့်သူတွေလို့.. အပြောတောင်ခံရသေး..
အရီးဒုံဒုံရဲ့.. စာရေးတာတွေကို.. Charity လို့သတ်မှတ်ပါကြောင်း..နော..။
ကျမကလည်း ဒုံကနေ ဒုံးဝေးတာ။
အလှူရှင် ဆိုတော့ ငါလည်း ဘယ်နားမှာ ဘယ်လောက် လှူထားတယ်ဆိုတာမျိုး ထည့်မရေးပဲ သူကြီးက ဘာတွေများသိလို့ပါလိမ့် တွေးနေမိတာ။
သူကြီးအလိုအရ ဆိုရင်တော့ ကျမ တနှစ်လုံး စာရေးတာတွေ အပြင် လူမှုရေး၊ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်နယ်အရေး လုပ်တာတွေလည်း Charity ပေါ့နော။
ခုလို သိရတာ အားရှိသွားပါတယ်။ ကျေးကျေး.
-အန်တီဒုံ့ စာကို ဖတ်ပီး..ကွကို ပြန်သုံးသပ်ဖို့ သတိရပါတယ်…
-၂၀၁၄ မှာ ဘာတွေ လုပ်နိုင်ခဲ့လဲဆိုတာပေါ့..စဉ်းစားမိသလောက်က အားရကျေနပ်စရာသိပ်မရှိ..
-ရှာရင်း သုံးရင်း ကုန်ရင်း ပြန်ရှာရင်း သံသရာမှာမျောပီး…တပင်တပန်းဖြတ်သန်းနေရတာဘဲ -မှတ်မိတော့တယ် :'(
တလတခါ ဒါဇင်ပလပ်စ်ရဲ့ အလှူလေးတွေဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနေတာ ရွှေအိ လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ခြေလှမ်းပဲပေါ့။
တစ်နှစ်လုံး အကြောင်းပြချက် မျိုးစုံနဲ့ အလုပ်တွေကို နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့ လုပ်နေမိတာ
တစ်လနေလို့ စာတစ်ပုဒ်တောင် မထွက်တဲ့အထိ နေနေမိတာ
လူကြီးတွေ တက်ကြွနေသလောက်၊ အလုပ်တွေလုပ်နေသလောက် ကိုယ်ကတော့ ဘာမဟုတ်တဲ့ အရာတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်ချင်ယောင် ဆောင်နေမိတာ…
ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် ပြန်ကြည့်မိပြီး ရှက်လိုက်တာဗျာ…….
ဟို ဗေဒင်ဆြာ ဟောတာတော့ မှန်ပြီထင်ရဲ့။
၂၀၁၅ မှာ တိုင်းရင်းသူလေး တွေ အန္တရာယ် ကင်းမယ် ဆိုလား။
.. ပြိုလဲသွားတဲ့ သက္ကရာဇ် တွေ ကို ပြန်ပြီး ငေးကြည့် တယ်ပေါ့လေ။ (စိုးလွင်လွင် သီချင်း မှ ခိုး လာသည်)
သံစဉ် အမှား တွေ အတွက် ကာရန် တွေ ပြန်ညှိလို့ ရရင် အမြတ်ပါဘဲ။ (စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်း မှ ကူးချသည်)
မဖတ်ရသေးတာ တွေ အများကြီး ပြန်ဖတ် လိုက်ဦးမယ်။
ရေးအားကတော့ အလက်ဆင်းကို မီအံ့မထင်။
သို့သော် Top 10 ထဲတော့ ၀င်လာပြီ။
သဂျီးရဲ့ ၁ သိန်းရဖို့ နီးလာပြီ။(လူမရှိတာ သိသာလိုက်တာ)
အဲ… မလတ်လည်း ၀င်နေပြီနော်။
သူကြီး မင်း က တွက်ချက်ပြီး နေမှာပါ။
အခု Top 10 ထဲ က လူတွေ က လိပ်နှုန်း နဲ့ ဘဲ တက်နေနိုင်တာ ကို။
သူ့ ဘတ်ဂျက် အတွက် နောက် ၂ နှစ် လောက် က တော့ အေးဆေး။ lol:-)))))))))))))))
အန်တီဒုံ 2014 မှာ အများကြီးလုပ်နိုင်ခဲ့တာပဲ…ကောင်းတာတွေချည်းပဲ…မီးတို့တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကောင်းတာလုပ်မိသလား ဆိုးတာပဲလုပ်မိသလား မခွဲခြားနိုင်သေးဘူးရယ်…
အန်တီက မကောင်းတာတွေကို အသာလေးဖွက်ပြီး ရေးလိုက်မိတာ ဖြစ်မှာပေါ့။
တီတီရေ… ကြိုးစားထားပါ မနောကတော့ မလိုက်နိုင်သေးတော့ Top One ဖြစ်အောင် လုပ်ထားနော်… အမြဲ အားပေးနေပါတယ်…. ဖိုက်တင်း… နှစ်သစ်မှာလည်း စာတွေ အများကြီး ရေးပါဦးနော်…
မနောတို့ ရေးအား၊ပို့စ်တင်အားကိုတော့ ဘယ်လိုမှ မမီနိုင်ပါဘူးကွယ်။
ဒါ့ကြောင့် လိပ်ဘိုးဘိုးတွေ လိပ်ဘွားဘွားတွေချည်းပဲ ကျန်တဲ့ Top 10 ကို သဂျီးက စိတ်ချလက်ချရှိတာပေါ့။
မနောရဲ့ ဟန်းနီးမွန်း ခရီးစဉ်လေးတွေ ရေးပါအုံး။